खेल्ने पढ्ने उमेरका ४ वर्षीय वाञ्चिन तामाङको उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा मृ’त्युको पर्खाइमा ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/खेल्ने पढ्ने उमेरका ४ वर्षीय वाञ्चिन तामाङको उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा मृ’त्युको पर्खाइमा !
पढ्ने खेल्ने उमेरमा जब तपाईंको बच्चा मृ,त्युलाई कुर्दै अस्पतालको बेडमा हुन्छ भने कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो सोच्नै सकिदैन्। हो एउटा त्यस्तै घ,टना घ,टेको छ तामाङको परिवारमा ।
उनी ४ वर्षीय वाञ्चिन तामाङ हुन, जो अहिले Neuroblastoma (Metastatic bone cancer) चौथो स्टेजको क्या,न्स,रले जिवन- म,रणको ल,ड़ाईमा छन् । उपचारको लागि लगभग ४० लाख लाग्ने परिवारले जनाएको छ। उनको परिवारको आर्थीक अवस्था नाजुक हुनाले उपचारको लागि सहयोग चाहिएको छ । इच्छुक व्यक्तिले ९८१८६०३६५४ /9818603654 मा सम्पर्क गर्नु होला ।
श्रीमान दुबईमा श्रीमती कोठाभित्र मृतावस्थामा भेटिइन्
सुन्दरी चियावाली’लाई मिडियामा ल्याउँदा शिशिर भण्डारीलाई गालीको ओईरो । ‘राम्री देखेर भाईरल बनायो’ भन्नेलाई शिशिरको कडा जवाफ (भिडियो सहित)